May 15, 2022 1640
गुल्मीको साविक बलेटक्सार गाविस–८ (हाल रुरु गाउँपालिका–४) ठानी`डाँडाका बुद्धिप्रसाद पन्थ (८४) को उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ठूलो इच्छा थियो । पारिवारिक कारण र आर्थिक अव`स्थाले गर्दा उनले त्यो बेला सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने`बाहेक माथिल्लो तहसम्म पढ्न पाएनन् ।
आफ्नो इच्छा र चाहना हुँदा`हुँदै पनि अध्यय`न गर्न नपाए पनि छोराहरूलाई भने दुःख गरेर पनि उच्च शिक्षा पढाउने पन्थको अठोट थियो । त्यो समयमा पन्थको परिवार निम्नमध्यम वर्गीय थियो । पन्थका ६ छोरा छन् । गुल्मीको बलेटक्सार, रिडी र थोर्गा खुदो`का लागि प्रख्यात ठाउँ हो ।
साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्र (हाल प्रदेश ५) गुल्र्मीको थोर्गाको खुदो भनेपछि सबै हुरुक्क हुन्छन् । पन्थको परि`वारले पनि उखु खेती गर्थ्यो । उनले उखु लगायत अन्य कृषि पेशामा दुःख गरेरै भए पनि ६ छोरोलाई उच्च शिक्षा`सम्म पढाए । छोराहरू सबै पढाइमा अब्बल भएर निस्किए ।
सबै भाइहरूले आदर्श मावि दिगाम–७ मा अध्ययन गरे । शुरूमा त्यो विद्याल`य निम्न माध्यमिक तहसम्म थियो । ६ भाइमध्ये जेठा यदुुलाल पन्थ र माहिला छोरा कृष्णप्रसाद पन्थले रिडी`स्थित विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे भने अन्य सबै भाइले आदर्श माविबाटै एसएलसी राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण गरे ।
जब ६ भाइमध्ये जेठा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे, त्यसपछि सबै भाइलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लोभ पलायो । सबै भाइको उमेर २–२ वर्ष मात्र फरक छ । त्यहीँ अनुसार निरन्तर मेह`नतका साथ अध्ययन गरेर सबै भाइ सरकारी सेवामा माथिल्लो तहसम्म पुग्न सफल भए । सबै भाइ सरकारी सेवामा खुला प्रतिस्प|र्धाबाट नाम निकालेर उच्च पदमा पुगेका हुन् । सम्भवतः नेपालमा यस्तो प|रिवार कमै होला । ६ भाइ कुन–कुन सेवाको कुन पदमा पुगे त ?
यदुलाल पन्थ अहिले रूपन्देहीको सैनामैनास्थित सामुदायिक शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख छन् । उनी ३० को दशकमा सरकारी शिक्षक थिए । २८ वर्ष सरकारी शिक्षण पेशापछि यदुलालले राजीनामा गरी क्याम्पस प्रमुख बनेर अहिले शिक्षा क्षेत्रमै कार्यरत छन् । उनी अहिले ९०० विद्यालय अध्ययनरत कलेजको प्रमुख छन् ।
बुद्धिप्रसादका माइला छोरा हुन् कृष्णप्रसाद । जब यदुलालले शिक्षक सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरे, कृष्णप्रसादलाई पनि सरकारी जागिर खाने हुटहुटी चल्यो । उनले नेपाल ‘ल’ क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
कृष्णप्रसादले २०४२ सालमा मुखियाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि खरिदार, वाणिज्य बैंकमा नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत, हुँदै उपसचिव बने । उनी पाल्पा हुँदै अहिले प्युठान जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । उनी सहसचिवको तयारीमा छन् ।
माहादेवले व्यवस्थापन संकाय`बाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी २०४४ सालमा मुखिया`बाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनले पनि काठमाडौंबाटै नाम निकाले । त्यसपछि उनी सलेप (सहायक लेखापाल), नायव सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव हुँदै अहिले सहसचिव छन् । काठमाडौंबाट नाम निकाले पनि उनले सरकारी सेवा भने काभ्रे`बाट शुरू गरे ।
काभ्रेपछि पाल्पा, प्युठान, रुकुम, जुम्ला, बाग्लुङ, रोल्पा, धनकुटा, कैलाली, तनहुँ, नवलपरासी, सुर्खेत, काठमाडौं हुँदै अहिले रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधि`कारी (सीडीओ) को रुपमा कार्यरत छन् । कार्यरत जिल्लामध्ये माहादेव ९ जिल्ला`मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए । माहादेव अब सचिवमा बढुवाको तयारीमा छन् ।
रविलालले अर्थ`शास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका छन् । उनी २०६२ जनप्रशासन एनपीएको गोल्डमेड`लिस्ट समेत हुन् । उनले २०५३ सालदेखि राष्ट्र बैंकको खरिदार सरह स`हायक द्वितीय`बाट सेवा शुरू गरेका हुन् । त्यसको ३ वर्षपछि रवि`लालले २०५७ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भए ।
अधिकृतमा नाम निकाले`पछि उनको पहिलो पदस्थापन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुखको रुपमा भयो । त्य|सपछि वन मन्त्रालय, त्यसपछि लोक`सेवा आयोग क्षेत्रीय निर्देशालयन कास्की पोखराको प्रमुख भए । फेरि लोकसेवा आयो`गको कार्यालय काठमाडौं आए । त्यसपछि उनी दाङ, महोत्तरी, सुनसरी, बाँके गरी ४ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए ।
त्यसपछि अख्ति`यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत, बुटवल हुँदै अख्तियार टंगाल काठमाडौंमा पनि काम गरे । अख्तियारपछि उनी सामा`जिक विकास मन्त्रालय प्रदेश १ मा दुई महिना काम गरेपछि अहिले प्रदेश ५ को आन्तरिक मा`मिला तथा कानून मन्त्रा`लयमा स`चिवको रुपमा कार्यरत छन् । २०६३ सालमा उपसचिव हुँदै २०६९ सालदेखि हालसम्म सहसचिव छन् । अब उनी सचि`वको तयारीमा छन् ।
विष्णुले पनि अर्थ`शास्त्रमा एमए गरेका छन् । उनी पनि खरिदार तहबाट २०४८ सालमा सर|कारी दूरसञ्चार क्षेत्र नेपाल टेलिक`मको सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । खरि`दार हुँदै अहिले उनी अधिकृत तहमा काठमाडौं`स्थित टेलिकममा कार्यरत छन् ।
कान्छा : डा. नुरापति पन्थ (टीयूको भौतिकशास्त्र सहप्रा`ध्यापक, सहस`चिव सरह)
नुरापति विज्ञान विषयका विद्यार्थी हुन् । उनले २०६४ सालमा प्राध्या`पकमा खुला प्रतिस्पर्धा`बाट नाम निकालेर त्रिभुवन विश्व`विद्यालयमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यस`अघि उनले काठमाडौंका विभिन्न निजी कलेजमा प्राध्यापन गर्थे । उनी टीयूको भौतिक शास्त्रतर्फको सह`प्राध्यापक सहसचिव सरहको पदमा रहेर कार्यरत छन् । उनले इटालीबाट पीएचडी समेत गरेका छन् ।
निरन्तरको अध्यय`नले सबै भाइलाई सफ`लता
रवि भन्छन्, धेरै ठाउँमा बस्दा खर्च धेरै हुने भएपछि हामी सबै काठमाडौंमा बसेर पढियो । २ वटा खाटलाई जोडेर ४ भाइले घुडा धसेर पढियो ।’ उनीहरूले ६ महिना`लाई पुग्ने चामल र दाल घरबाटै लैजान्थे । बुद्धि`प्रसादले छोराहरू`लाई पठाउने खाद्यान्न पाल्पाको तानसेनसम्म बलेटक्सारबाट भरिया नै लगाएर ल्याउँथे र पाल्पाबाट काठमाडौं गाडीमा पठाइदिन्थे । निरन्तरको अध्ययन, विषयवस्तुको ज्ञान र प्रतिस्पर्धा`लाई ध्यान दिएर अध्यय`न गरेमा लोक सेवा उत्तीर्ण गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव रविलाल बताउँछन् ।
सबै भाइले निजी क्षेत्र`को जागिर`का लागि इच्छा पनि गरेनन्, भनसुन`तर्फ पनि लागेनन् । निरन्तर अध्ययन गरेपछि सबै भाइ सफल भए । ‘लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिनुभन्दा अघि मेहनत गरेर अगाडि बढे भने सफल भइन्छ भन्ने विश्वा`स र भरोसा हुनैपर्छ । लोकसेवा आयोगमा`र्फत् हुने सम्पूर्ण जाँचहरू निष्पक्ष हुन्छन्,’ रविलालले भने ।
Prevबालेन साहको मत स्थापितको भन्दा झण्डै दोब्बरले बढी
Nextरेनु दाहाललाई उछिने एमालेका विजय सुवेदीले
भर्खरै निर्वाचित मेयर रेणु दाहाल सवार गाडी दु`र्घ`टना
गलत सु’ई लगाएका कारण छोरी जन्मिए-पछि दम्पतीले पाए १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ…
फेरी मेनुकाले राजु परियार’सँग रुँ’दै गीत गाईन् (भिडियो सहित)
आमा बित्दा छोराहरू आउँदै आएनन्, ४ छोरीले गरे आमाको अन्तिम संस्कार….
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136440)